Fikarohana momba ny firaisana Drafitry ny fanahin'ny fanahy, ny fanahy sy ny fanovana amin'ny endriny mitovy amin'ny fianakavian'ny fianakaviana: ny tantaram-piainan'ny Jaako Vuorenlehto | Taru Jarvi - Fikarohana Reincarnation
Drafitra fanahy: toy ny ankizy, Jaako sy Iris dia mahalala fa hanambady amin'ny ho avy izy ireo
I Jaako Vuorenlehto dia teraka tamin'ny volana 15 1929 tany Helsinki, Finlande, ho an'ny fianakaviana kristiana lutherana. Antsoany hoe Jaska ny anarany. Toa tanora i Jaako dia toa nanana fifandraisana manokana tamin'ny zazavavy antsoina hoe Iris Sundstrum, izay teraka tao 1935. Iris dia tanora 6 taona noho i Jaako. Raha mbola zaza ireo, dia nifankahita ihany izy roa. Tsy namorona mariazy izy ireo mandra-pahatongan'ny 1970, fony i Jaako dia 40 taona.
Na dia vao 18 taona aza i Jaako, dia nilaza tamin'ny namana iray i Jaako, miresaka an'i Iris: "Indray andro dia hanambady an'io tovovavy io aho." (1)
Nandritra izany fotoana izany dia nilaza tamin'ny namana iray i Iris, tamin'ny taona 12, tamin'ny filazana ny trano niainan'i Jaako: "Indray andro any dia hipetraka ao amin'io trano io aho." (2)
Satria samy manana ny fanomezan-dàlana izy ireo mba hanambady amin'ny hoavy, i Jaako sy i Iris dia maneho fa fantatr'izy ireo ny hiaina tanjona na drafitra. Maro ny tranga sasany momba ny fanambadiana any amin'ny vatana hafa mampiseho fa tena manao izany isika hamarino ny fiainana ho avy avy amin'ny tontolon'ny fanahy.
I Iris, ohatra, dia nanambady lehilahy iray hafa, izay nahazoany zaza 3. Taoriana kelin'ny fiainany dia nihaona tamin'i Jaako sy i Iris, nifankatia ary lasa tia. Iris dia nisara-panambadiana ny vadiny voalohany ary tamin'ny 1970, fony JaNac dia 40 ary Iris dia 34, dia nanambady izy ireo. Nanana fifandraisana feno fifaliana izy ireo.
Reincarnation, Change gender and Jaako's Feminine Side
Nanana toetra tsy mahazatra i Jaako noho izy tia fahafinaretana ho an'ny vehivavy. Na dia tia lehilahy aza izy, toy ny milalao hockey hockey, fiara sy fiara mitondra fiara, dia nahafinaritra azy koa ny milalao saribakoly. I Jaako dia tia tifitra kofehy, manjaitra lambam-pandriana ary nahazo ny akanjon'ny vehivavy izy, izay hividianany an'i Iris.
Na dia lava sy malefaka aza i Jaako, dia nanamarika i Iris fa nihetsika tamin'ny fomba fiteniny izy. Na dia teo aza ireo fomba amam-panao ireo ary na dia nino ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana hafa aza izy, dia tsy naneho ny faniriany ho tonga vehivavy i Jaako.
Ian Stevenson dia nanamarika fa amin'ny 90 isan-jaton'ny trangan'aretina teraka ao amin'ny vatana vaovao indray, ny lahy sy ny vavy dia tsy miovaova amin'ny androm-piainany iray ka hatramin'ny iray hafa, izay manondro fa misy fanahy iray manana lahy sy vavy tiany. Araka ny hitantsika, i Jaako dia ho tonga nofo indray amin'ny maha-vehivavy azy ary mety ny tarehin-toetrany vehivavy dia maneho ny safidin'ny fanahiny ho an'ny nofo nofo vehivavy. Mety koa i Jaako dia fanahy izay aleony tonga nofo tahaka ny lahy sy ny vavy amin'ny fomba mifandimby, ka miaina ny toetran'ny lahy sy ny vavy.
Ny i Jaako dia mivoaka amin'ny bus ary novonoina
Tamin'ny volana 13 1973, 43, fony i Jaako dia 3 taona ary XNUMX taona monja taorian'ny nanambadiany an'i Iris, dia notifirin'ny bisy izy, raha vao nivoaka ny fiara. Kodiarana iray teo amin'ny fiara fitateram-bahoaka no nitarika ny tratrany, ny tendany ary ny lohany. Nisy dokotera nandinika an'i Jaako, taorian'ilay loza ary nilaza fa maty teo amin'ilay sehatra izy.
Drafitra fanahy: Avy amin'ny tontolon'ny fanahy, Jaako amin'ny maha-fanahy azy mialoha ny haterahany ao amin'ny vatana vaovao & mampahafantatra an'i Iris fa hateraka indray izy ho zanany vavy
Vao herintaona taorian'ny nahafatesan'i Jaako, dia nanambady indray i Iris, lehilahy iray atao hoe Heikki Jarvi, vadiny fahatelo. Herintaona taty aoriana, tamin'ny volana septambra 1975, nitsidika an'i Jaako i Iris ary nahazo hafatra avy aminy.
I Iris dia nandre ny feon'i Jaako, izay nilaza taminy fa hiteraka azy amin'ny maha-zanakavavy azy ny May 27. Iris dia 40 taona tamin'io fotoana io. Tsy bevohoka tamin'izany fotoana izany izy ary tsy nanantena ny ho bevohoka.
Na dia izany aza dia bevohoka i Iris ary niteraka zazavavy kely tamin'ny 27 1976, 3, araka ny nambaran'i Jaako. Ny zazavavy dia antsoina hoe Taru, izay teraka tsy latsaka XNUMX taona taorian'ny nahafatesan'i Jaako.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Taru mampahafantatra ny ray aman-dreniny ny anarany dia i Jaska
Rehefa tarika 1 ihany i Taru, dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny izy fa notriin'ny bus iray izy. Raha izy no 1 sy ny antsasaky ny taona dia hoy izy tamin'ny ray aman-dreniny: "Tsy Taru aho; Jakka no anarako. "(3) Tsarovy fa i Jasako dia anaram-bosotra an'i Jaako.
Ity toe-javatra ity dia mampahatsiahy ny Francesco Foscari | Fijangajangana vovoka Wayne Peterson, satria nandà ny anarana nomeny i Wayne, ary nanizingizina fa antsoina hoe "Francesco Foscari."
Raha Tarn dia 3 ary ny antsasaky ny taona, dia hoy izy tamin'ny reniny, Iris: "Tsy reniko ianao. Nijanona teo ambany fiara iray aho ary maty. Tsy fantatrao ve? "(4)
Izany dia mampahatsiahy ny tranga vao teraka indray Anne Frank | Barbro Karlen, araka izay nolazain'i Barbro tamin'ny ray aman-dreniny fa tsy ireo ray aman-dreniny tena izy, ary ny ray aman-drenin'izy ireo dia ho tonga ary hitondra azy any amin'ny tranony tena izy.
Reincarnation, Fiovan'ny lahy sy ny vavy ary fahatsiarovana ny fiainana taloha: Taru dia mahatsiaro fa lehilahy novonoin'ny bus
Nangataka fanontaniana fanampiny i Taru, toy ny hoe tovolahy na tovovavy fony izy maty ary karazana fiara namono azy.
Namaly i Taru hoe: "Mazava ho azy fa zazalahy, zazalahy kely." Hoy izy momba ilay fiara: "Lehibe. Voalohany dia maty ny vavony, avy eo ny loha. "" Nentina tany amin'ny hopitaly aho saingy efa maty tamin'izany fotoana izany. "(5)
Matetika i Tara no niteny hoe: "Lehilahy goavambe aho." (6) Rehefa nahita fiara kilalao lehibe izy izay an'i Jaako, dia nilaza izy fa azy izany. Nolazainy fa imbetsaka izy no niara-nilalao tamin'ity fiara kilalao ity.
Toa tian'i Taru ny nitazona sarin'i Jaako teo am-pandriany, na dia tsy nilaza mazava aza izy fa sarin'ny azy io. Nilaza ihany anefa i Taru hoe: "Tsy tokony hatahotra ny ho faty ianao satria efa imbetsaka aho no maty." (7) Nilaza izy fa fony mbola teo am-piaingana tany Alemaina dia nanana reny iray antsoina hoe Senya izy.
Reincarnation & Gender Change: Mangataka basy i Taru, stick hockey ary manizingizina fa zazalahy izy
Nandritra ny naha ankizy azy dia nampiseho ny fitiavam-pitiavam-pitiavam-pitiavam-bavaka i Taru. Niara-nilalao tamin'ny miaramila kilalao izy ary nanao izany, nanao fiarovan-doha ary nitondra basy. Niangavy ny ray aman-dreniny izy mba hividy basy tena izy sy hockey, ary mody mihazakazaka fiara izy. Tadidio fa tia mihaza i Jaako, milalao hockey ary mitondra fiara.
Taru dia tsara ny akanjon'ny akanjon'ny zazalahy, raha oharina amin'ireo zandriny, izay nankafy akanjom-behivavy. Amin'ny filalaovana amin'ny ankizy hafa dia tsy handray anjara amin'ny toeran'ny ankizivavy izy, fa kosa hanizingiziny hoe "zazalahy aho." (8)
Amin'ny maha-olon-dehibe azy, dia mbola nanohy nampiseho ny akanjo masculine foana i Taru tamin'ny alàlan'ny fitondrany ny pataloha ary tsy mitafy velively.
Reincarnation & Gender Identities Issues mandritra ny androm-piainana roa
Ny famantarana an'i Taru miaraka amin'ny lahy sy ny vavy dia toa taratry ny naha nofo azy taloha ho Jaako, izay naneho ny toetrany vehivavy. Ity tranga ity dia mampiseho ny fomba hanazavana ny olana momba ny lahy sy ny vavy ao amin'ny vatana vaovao.
Ny hafetsen'i Taru eo anatrehan'ny Ray
Taru nibitsibitsika tamin'i Heikki, ny rainy, toa ny lehilahy taloha, dia manambady vadin'ny vadiny taloha. Raha vao nilaza tamin'i Iris izy, niresaka tamin'i Heikki:
"Afaka mandeha izy ary afaka miara-miaina tsy misy azy." (9)
Niteny tamin'i Heikki mivantana i Taru: "Tsy mila anao izahay. Tokony handeha ianao. "" Vahiny fotsiny ianao. "(10)
Raha lazaina amin'ny teny hafa, toa i Jaako, araka ny endrik'i Taru, dia naniry ny hanaisotra an'i Heikki mba hahafahan'ny Iris ho lasa vady. Ny fihetsika manimba an'i Taru manoloana an'i Heikki sy ny fomba fiteniny manoloana an'i Iris dia nahatonga an'i Heikki sy Iris hiaina manokana nandritra ny fe-potoana.
Fiafaran'ny fiainana an-davan'andro ary ny daty nahafatesan'i Jaako
Raha vao taona i Taru, dia natahotra mafy izy tamin'ny fiara fitaterana, traktera ary fiara lehibe. Nanontany an'i Iris izy haka azy rehefa manakaiky ny bisy. Mifanohitra amin'izany, tsy natahotra ny fiara kely izy. Ity tohodranon'ny fiara fitateram-bahoaka sy fiara lehibe ity dia mbola mitohy mandra-pahatongan'ny 19 taona.
Nanana tahotra manafintohina ihany koa i Taru ny andro fahatelo ambin'ny folon'ny volana, izay andro nivezivezivezin'ny bisik'i Jaako.
Reincarnation sy endrika ara-batana
Iris sy ny renin'i Jaako (renibeny Taru) dia samy nanamarika fa misy endriny akaiky amin'ny endrika sy pigmenta eo amin'i Jaako sy Taru. Ankoatr'izay dia nihalehibe sy nihanatanjaka i Taru, tahaka an'i Jaako. Nihalehibe i Taru noho i Heikki, rainy.
Ity toe-javatra tena mahavariana momba ny fanambadiana vaovao ity, raha manaiky, dia maneho ireto zavatra manaraka ireto:
Fitoviana ara-batana: Ny renin'i Iris sy Jaako dia samy nanamarika endrika mitovitovy endrika teo amin'i Jaako sy Taru, izay nanana ny endrik'olona iombonana amin'ny maha-avo lenta azy ireo. Hatramin'ny niorenan'i Jaako ho zanakavavin'ny vadiny, Iris, ary ny vadiny vaovao, Heikki Jarvi, dia tsy misy fifandraisana ara-piraisana eo amin'i Jaako sy Taru. Ity dia fiompiana zana-piangonan'ny fianakaviana mifototra amin'ny fanambadiana, fa tsy tsipika ara-panafody iombonana.
Noho izany dia tranga tena mahavariana izay mampiseho ny fitoviana ara-batana avy amin'ny fampodiana iray mankany amin'ny iray hafa.
Soul Plan & Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny raharaha ao amin'ny vatana: Taorian'ny fahafatesan'i Jaako, nahazo hafatra avy taminy i Iris, raha nitsidika ny fasana izy. I Iris dia nandre ny feon'i Jaako, izay nilaza taminy fa hiteraka azy amin'ny maha-zanakavavy azy amin'ny May 27. Tamin 'ny nahaterahan'i Taru no nahitana ny faminanian'i Jaako. Tahaka izany, i Jaako dia nanomana mazava ny fomba fiasan 'izy taorian' izao manaraka izao raha ao amin 'ny tontolon'ny fanahy.
Amin'ny endriny iray hafa momba ny fomba ijeren'ny fiainana aorian'ny nahaterahantsika, dia samy manana ny fanomezan-daza, toy ny zatovo, i Jaako sy i Iris, fa hanambady amin'ny ho avy. Jaako, tamin'ny taona 18, dia nanao fanambarana fa hanambady an'i Iris. I Jaako sy Iris dia nanambady 22 taona taty aoriana, fony i Jaako dia 40 taona. Talohan'ny fanambadiany, i Iris dia nanambady olon-kafa, izay nahazoany zaza 3.
Ny fahatarana amin'ny fahatongavany dia ny marina dia manambara fa ny fanambadian'izy ireo dia tsy faminaniana mahafa-po, fa toa hita fa nahafantatra tsara ny fifandraisana iray izy ireo. Noho izany, dia toa nifankahalala izy ireo talohan'izay, teo amin'ny fiainana talohan'io.
Ireo toe-java-baovao ao amin'ny vatana, toy izany dia mampiseho fa tena manao drafitra momba ny fiainantsika amin'ny ho avy isika amin'ny tontolon'ny fanahy. Ireo drafitra ireo dia lasa anjarantsika ary tia ny fahitana voalohany, na ny fanoloran-tenan'ny fanambadiana, dia fanehoana ny drafitry ny fiainantsika amin'ny hoavy.
Mariho fa ny tranga rehetra momba ny fanambadiana ao an-tokantrano dia mitaky ny fanomanana ny fanahy.
Zava-misy eo amin'ny sehatry ny fanambadiana gasy: Jaako indray no lasa zanaka vavy vavy, Taru. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia lasa zanakavavy iray ny vadiny iray nandritra ny fiainany iray manontolo.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy: Jaako, tovolahy iray, nipoitra ho Taru, vehivavy iray. Ny mahaliana, nandritra ireo androm-piainany roa, dia naseho ireo toetra mampiavaka ny lahy sy ny vavy. I Jaako dia naneho fialam-boly ho an'ny vehivavy, toy ny milalao saribakoly, fanjaitra ary firaiketam-behivavy. Tetsy an-daniny, nitantara toy ny zazalahy i Taru tamin'ny nilalao tamin'ny miaramila, fiarovan-doha ary basy. Raha tia ny akanjon'ny vehivavy Jaako, dia nanao akanjo toy ny lehilahy i Taru.
Ny fisafotofotoan'ny lahy sy vavy mifototra amin'ny traikefa niainan'ny fiainany dia mety ho fototry ny korontana misy eo amin'ny lahy sy vavy, toy ny transsexualism.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 144
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 144
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 146
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 146
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 146
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 146
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 146
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 147
9. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 147
10.Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 147